Mukupedzisira zvakaitika, mushure mekurambidzwa kwaTrump pamasocial network, dambudziko remutemo mavari rinomuka | Linux Vakapindwa muropa
Pakupedzisira zvakaitika, mushure mekurambidzwa kwaTrump pamasocial network, dambudziko remutemo mavari rinomuka
Pakati pevhiki rapfuura zviitiko zvakasiyana zvakagadzirwa Mukupindura kwezviitiko zvakaitika muCapitol, zviitiko zvinonzi zvakaburitswa pamasocial network emutungamiri wenyika yeUnited States. "Donald Trump".
Mushure mezviitiko izvi mamwe masocial network nemamwe mapuratifomu teknolojia vakasarudza kuita mushure meakaundi ye Twitter yaDonald Trump yakavharwa zvachose.
Uye zvakanaka, apa ndipo panotangira chikamu chinonakidza yenyaya yacho, kubvira kubvira akasiyana mapuratifomu mapuratifomu vakaita sarudzo yavo yekuita pane zviitiko pfungwa dzakakamurwa zvakanyanya mumisasa miviri «avo vanofarira» uye avo «vachipesana».
Kunyangwe paigona kuve nekusarerekera, avo vasina hanya, mune ino mamiriro hapana poindi yepakati, nekuti zviitiko zviri kuda kuitika pasina mubvunzo zvicharatidza chimwe chinhu chakakosha nezve kwatiri kuenda isu sesosaiti nekuziva nzvimbo uye chii chichafanirwa kuitwa pamusoro pemagariro enhau.
Uyu ndiwo musoro wenyaya wakakwikwidzwa kwenguva yakareba uye semuenzaniso tinogona kudzokera kumashure mamwe makore gumi uye titore sereferensi zvakaitika kuEjipitori.
Izvo zvinofanirwa kutariswa kuti kudivi revaya vanowanikwa nemhinduro yetekinoroji mapuratifomu nezveTrump, ivo vanonyanya kufunga. "Rusununguko rweMutungamiri rweUS Rwunotaura Ruri Kurambwa?"
Tichifunga izvi, mazhinji emapuratifomu anoruramiswa nekudiwa kwekurwisa kurudzira mhirizhonga inoparadzirwa nezvinyorwa zvavo.
Kune rumwe rutivi, Gurukota rezveMari razvino reFrance Bruno le Maire vanoshora oligarchy yedhijitari iyo inotyisidzira demokrasi:
“Chinondishamisa nekuvharwa kweTwitter account yaDonald Trump ndechekuti Twitter ndiyo iri kuvhara. Iyo mirau yedhijitari vanhu haigone kuitwa neiyo digital oligarchy pachayo. Iyo oligarchy yedhijitari ndeimwe yekutyisidzira kunoenda pamusoro penyika nehutongi hwejekerere. Mutemo unodikanwa, asi unofanirwa kuitwa nevanhu vanozvitonga, neAmerica uye nekutonga ”
Ndichiri mugermany nekuenda kwemutauriri waAngela Merkel:
“Chancellor anoona kumbomiswa zvachose kweakaundi yemutangamire pachigaro kunonetsa. Kodzero dzakadai serusununguko rwekutaura dzinogona kudzorwa, asi nemutemo uye mukati mehurongwa hunotsanangurwa nemutemo uye kwete nedanho rekambani. "
Iyi mamiriro akagadzirwa akagadzira yakakosha poindi yekukakavara pakati peUnited States neEurope maitiro ekugadzirisa mashandiro enhau.
Uye zviri mukati EU inoda kupa vatongi mamwe masimba ekumanikidza mapuratifomu kubva paInternet senge Facebook kana Twitter kubvisa zvisirizvo zvisiri pamutemo uye muUnited States, kune rumwe rutivi, kuongororwa kwezviri mukati yakaburitswa pamapuratifomu avo kusvikira zvino rave riri basa revapi vepainternet sevhisi, kunyange hazvo matanho ezvematongerwo enyika anovavarira kudzora rusununguko rwavo ari kuramba achiwedzera.
Aya matanho atove ave kushanda kwemwedzi yakati wandei mumabhiri akasiyana ayo anogona kudzikisira kudzivirirwa zviri pamutemo uko makambani enhau enhau kubva pakumhan'arirwa kweyechitatu-bato zvemukati zvakatumirwa panzvimbo dzadzo.
Ipo vamwe vari kukwikwidza bhiri idzva rekuchengetedza dhata, iro rinogona kuratidzira General Data Dziviriro Regulation (GDPR) yeEuropean Union.
Nharo pamusoro pesimba rezvenhau uye dudziro ichapihwa kune rusununguko rwekutaura iwo zviri nyore nyaya dzakapusa.
Naizvozvi, ivo vakaiswa mumapoka akati wandei pakati pavo ari: avo vanofunga kuti masocial network haasi eruzhinji masevhisi, nepo vamwe vachivaona seakakosha maererano nekutaurirana uye kune vamwe vanofunga kuti mapuratifomu aya anogona kutorwa sevashandi veveruzhinji kana ivo inofungidzirwa maererano nekuwedzera kwayo.
Zvemagariro midhiya zvakagara zvichidzivirira idzi gakava nekuzvimisikidza seyakarerekera zvemukati
Asi kubva pakurwiswa kweCapitol, zvave kuwedzera pachena kuti vane simba uye mutoro pamusoro pekupokana kwevanhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Pakupedzisira zvakaitika, mushure mekurambidzwa kwaTrump pamasocial network, dambudziko remutemo mavari rinomuka
Lucretius Orontius akadaro
Zvakanaka, zvinoita sekunge tadzokera kune zvakaonekwa muEurope panguva yekuvapo kweKubvunzurudza uye fascism; avo vasingafunge sesu vanofanirwa kutsakatiswa kubva pachiso chenyika. Iwo masocial network ivo vari kuchera gomba umo ivo pachavo vanozovigwa kana mafungu atendeuka uye ivo nemaboss avo ndizvo zvinangwa zvevanhu vakatsamwa. Iwe haufanire kuve imba yechiedza kuti uone zvavari kuita. Rusununguko ikodzero iyo ndeyako chete kana yako maonero iri chaiyo kopi yeizvo isu tese tinoda kunzwa.
Pindura kuna Lucrecio Orontius
Ini ndinotenda kuti vanhu havanzwisise kuti kukwanisa kududzira mazano neruzivo vasina kubhadhara pane yepamhepo saiti neimwe nzira zvinoita kuti zvive pachena kana "kusununguka", kuti vane "Kodzero" yekufunga kuti zvivakwa zvega zvinofanirwa kupindirwa makambani anopa masevhisi kuchengetedza "rusununguko rwekutaura" zvinoenderana navo kuti, kubva panguva iyo mamiriro ezvinhu ebasa anogamuchirwa, chibvumirano chekudyidzana kana chibvumirano chemapato (mutengi nekambani) chakatemwa, izvo zvinofanirwa kuve zvakazadzikiswa uye izvo zvinowanzo pindirwa pane dzimwe nguva nemutemo wenyika ... Kana zvisingakwanise kunyora chimwe chinhu pa internet, ndinotarisira kuti havauye sevanhu vanotaura vachitaura nezverusununguko rwekutaura nekuti izvo zvavari kuda kutonga kwevanhu. pasocial network, chimwe chinhu chinoita zvekunakidzwa nevezvematongerwo enyika vese uye vangangoita mudzvanyiriri.
Slimbook Titan: iyo mhuka nyowani yekutamba kubva kuSpanish brand
Asus anoyambira kuti makadhi emifananidzo ari kuda kuwana anodhura zvakanyanya